विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंले ल्याएको सामान विमानस्थलमा जफत हुनसक्छ (आयो नयाँ नियम) – Purba Aawaj
विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंले ल्याएको सामान विमानस्थलमा जफत हुनसक्छ (आयो नयाँ नियम)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ २४, २०७८ समय: ९:२८:२०
विदेशबाट नेपाल फर्किंदै हुनुहुन्छ ? फर्किँदा विगतको जस्तै टन्नै सामान ल्याउने योजना छ भने विचार पुर्‍याउनुस् । पछिल्ला दिनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भन्सारमा सामान जाँच कडा बनाएको छ ।
व्यवसायिक पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सामान व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि २–२ थानसम्म ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याउन सक्छन् ।चुरोट दुई सय खिल्लीसम्म र सिगार ५० खिल्लीसम्म पनि समदरमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।
विदेशमा काम गरेर फर्किने नेपाली कामदारले १०० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउँछन् । त्यसका लागि कर तिर्नुपर्छ ।५० ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा एक ग्रामको ५२० रुपैयाँका हिसावले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार १० ग्रामको ५२ सय र ५० ग्रामको २६ हजार भन्सार लाग्छ ।
१०० ग्राम सुन ल्याउने हो भने पहिलो ५० ग्राममा २६ हजार रुपैयाँ र पछिल्लो ५० ग्राममा ३१ हजार भन्सार तिर्नुपर्छ । सय ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा जफत हुन्छ । ठूलो परिमाणमा सुनको गहना लगाएर आउँदा पनि जफत गरिन्छ ।सरकारको यस्तो नियम तपाई लाई कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा आफ्नो राय राख्नु होला
Last Updated on: July 8th, 2021 at 9:28 am